Kuratidza zvinyorwa neelebheri Wallenstein
Wallenstein (Waldstein) iko kuparara mudunhu reSemily pedyo neTurnov, muParadhiso yeBohemian. Imba yemhuri yemaNashe eWallenstein yakatanga kusvika kune yechipiri yezana regumi nematatu. Iyo ndeimwe yekare nzvimbo mudunhu rino.Zvino Wallenstein iri muguta reTurnov.
Nhare iyi yakavaka imwe yematavi emhuri yeMarvartic mumakore 1260 kusvika ku1280. Yakanga zvichida kubva Jaroslav Hruštice kana mwanakomana wake Zdenek Wallenstein akazova dzokugara mhuri dzavo, maererano zvavakanga nezvizvarwa zvavo vakashandisa Predicate madzishe Wallenstein. Vane zita rinonzi Wallenstein.
Jaroslav kubva Hruštice (Hruštice nhare yaiva Turnova) pakutanga akashandisa zita Jaroslav Lemberka nekuti aiva nhengo yemhuri LEMBERK, wechitatu mwanakomana Havel pakati Lemberk. Havel pamusoro Lemberk wakabva Markvartic uyo akakunda kuchamhembe muBohemia, nzvimbo huru rubatsiro Pfemyslids. Jaroslav mai rakanga Zdislava pamusoro Lemberk, somusande muna 1995.
Waldstein (Waldstein) iko kuparara mudunhu reSemily pedyo neTurnov, muParadhiso yeBohemian. Imba yemhuri yemaNashe eWallenstein yakatanga kusvika kune yechipiri yezana regumi nematatu. Iyo ndeimwe yematumba ekare mudunhu rino. Iye zvino Valdštejn iri munharaunda yeguta reTurnov. Imba iyi yakavakwa nerimwe remapazi emhuri yeMarkvartic pakati pegumi nemaviri kusvika 13. Ingangove Jaroslav weHruštice kana mwanakomana wake Zdeněk naValdštejn vakava chigaro chavo chemhuri, zvichienderana nekuti ivo nevazukuru vavo vakashandisa kufungidzira kwaIshe veWallenstein. Ivo vanonzi Wallenstein. Jaroslav weHruštice (Hruštice aive nhare pedyo neTurnov) pakutanga akashandisa zita rekuti Jaroslav weLemberk, nekuti aive nhengo yemhuri yeLemberk, mwanakomana wechitatu waHavel weLemberk. Havel weLemberk akabva kumhuri yaMarkvartic, iyo yakawana nzvimbo dzakakura kuchamhembe Bohemia nerubatsiro rwePřemyslids. Amai vaJaroslav vaive Zdislava veLemberk, vakagadzwa muna 1260. Mhuri yaWallenstein yakagara pano kwemakore zana. Semuenzaniso, Zdeněk weWallenstein, mutungamiriri waMambo John weLuxembourg, Hynek weWallenstein,…